Ciyaartoyda Ugu Taajirsan Horyaalka Premier League Oo La Shaaciyey, Pogba Oo Garaacay De Bruyne & De Gea Iyo Halka Uu Ku Jiro Mohamed Salah - Gool24.Net
Ciyaartoyda Ugu Taajirsan Horyaalka Premier League Oo La Shaaciyey, Pogba Oo Garaacay De Bruyne & De Gea Iyo Halka Uu Ku Jiro Mohamed Salah
Xiddiga reer France ee Paul Pogba ayaa noqday laacibka ugu taarirsan ciyaartoyda ka dheesha horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League, waxaanu kaalinta koowaad kaga soo baxay liiska laacibiinta qaniga ah ee gudaha Ingiiriska joogta.
Inkasta oo uu Lewis Hamilton yahay laacibka ugu qanisan bahda isboortiga gudaha UK oo uu ka sare maray David Beckham oo aan muddo dheer cidi ku qabsanin liiska, haddana Paul Pogba ayaa noqday qofka ugu lacagta badan ciyaaryahannada kubadda cagta ciyaarta.
Wargeyska Sunday Times ayaa daabacay liiska ciyaartoyda kubadda cagta ugu UK ugu hantida badan sannadkan, kuwaas oo lagu tilmaamay inay yihiin maalqabeenno soo koraya.
Laacibka Manchester United khadka dhexe uga ciyaara ee Paul Pogba oo hantidiisa hadda lagu qiyaasay £50 milyan oo Gini ayaa kaalinta koowaad galay, waxaana kusoo xiga kubbad-sameeyaha Manchester City ee Kevin de Bruyne iyo goolhaye David de Gea oo mid walba uu haysto adduun gaadhaya £34 milyan.
Raheem Sterling ayaa ciyaaryahanka afraad ah ee liiska ugu sarreeya ah, waxaanu haystaa hanti gaadhaysa £28 milyan, halka uu N’Golo Kante soo cidhiidhsaday shanaad oo uu ka sarreeyo Harry Kane oo ay kala leeyihiin £25 milyan iyo £24 milyan.
Kabtanka Liverpool ee Jordan Henderson ayaa haysa adduun gaadhaya £21 milyan, waxaanu wax yar ka sarreeyaa Virgil van Dijk oo £20 milyan haysta iyo Mohamed Salah oo £19 milyan leh.
Halkan ka akhriso liiska ciyaartoyda ugu taajirsan Premier League:
Si kastaba, waxa liiskan ka maqan xiddiga ugu mushaharka badan horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ee Mesut Ozil oo usbuucii u xaadira lacag ka badan 350,000 Gini.